सांसद गंगा चौधारीको वि’रोध गर्दै सरिता गिरिको सपोर्ट गर्ने नेपाली हैनन : ✍️ रबिन ढकाल – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सांसद गंगा चौधारीको वि’रोध गर्दै सरिता गिरिको सपोर्ट गर्ने नेपाली हैनन : ✍️ रबिन ढकाल
नेपालमा अहिले 129 ओटा मातृ भाषा बोल्ने मानिसहरु छन । नेपालको कुनै जातिको मातृ भाषा हिन्दी हैन । ब्यबस्थापिका संसदको नियमावलीमा पनि मातृ भाषामा कुरा राख्न पाइन्छ भन्ने नियम छ तर अर्काको देशको भाषामा कुरा राख्न पाउने अधिकार कस्ले दियो ?
सरिता गिरिको मात्री भाषा हिन्दी होला के त्यस्को मात्री भाषा हिन्दी हो भन्दैमा यसरी खु’लेआम चु’नौती दिन मिल्छ ? यो भारतको दुत’लाई नेपालिको पसिनाको पैसाले पाली रहने हो अब ?
आखिरी के खो’जेकी हो यस्ले ? कुन देशमा यस्तो अबसर छ जहाँ बिदेशी भाषामा कुरा राख्दै यहाको सरकारलाई चुनौती दिन पाइने ब्यबस्था ?लर्ड मेकलेले भने अ’नुसार कुनै पनि देशलाई आफ्नो कब्जामा लिनु छ् भने सबै भन्दा पहिले त्यहाको भाषा र संस्कृतिमा हमला गर्नु पर्छ रे ।
देशको भाषा र संस्कृतिमा हमला गरे पछि जस्तो भन्यो त्यस्तै बनाउन सकिन्छ रे । त्यही बु’झेर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तत्वको सकृयता बढ्दै गएको छ । नेपालीहरु पनि त्यस्तैको पुच्छर भएर हिड्ने र एकले अर्कोको रीतिरिवाज माथि धावा बोल्दै हिँड्न थालेका छन । अहिले नेपालका कृ’श्चियन लर्ड मेकलेको भनाई अ’नुसरण गर्दै हिँडेका छन ।
सरिता गिरि भन्ने माननीय हो ताननिय के हो ? उस्ले हिन्दिमा थर्का’इरहदा बाकी अन्य नेपाली भाषी सांसद कति गमक्क परेर सुन्छन ? एक जनाले हिन्दी नबोल भन्न नसक्ने कस्ता मान्छे हुन ? मौ’न बस्नु भनेको समर्थन गर्नु नै हो त्यसैले अरुले उस्लाई घुमारो रूपमा सम’र्थन गरेका त हैनन ?
जस्ले जे गरे पनि हुने ठाउँ हो नेपालको संसद ? हुन त कुर्सी भाँच्नेलाई कुर्सी नै दिने देश भएर होला त्यस्ता कुरा कसैलाई प्रभाव नपरेको । सरिता गिरिको कृ’याकलाप भारतका गुलामलाई त केही नलाग्ला । तर स्वाभिमानी नेपालिलाई अबस्य पनि पच्दैन ।
गंगा चौधरीले बिरोध गर्दा गंगा चौधरिको बिरोध गरेर त्यो गिरिको समर्थन गर्ने नेपाली पनि देखियो । त्यो गिरिको समर्थन गर्ने ले त गु खा’ए हुन्छ । गिरिको समर्थन गर्ने मान्छे नेपाली हुन सक्दैन । तराइमा आफ्नै मात्री भाषी छन । थारु, मैथिली अवधी, ताजपुरी आदि भाषाहरु नेपालमा बोलिने मात्री भाषा हु’न ।
यी कुनै पनि भाषामा बोल्दा आपत्ती कसैलाई हुदैन । तर हिन्दी भनेको भारतको भाषा हो । सम्मा’ननिय प्रधानमन्त्री खड्ग ओलि के सोच्दै हुनुहुन्छ ? अनि सभा’मुख महोदय ? के छ बिचार ? अब फेरि हिन्दी भाषामा बोल्न दिने कि रोक्ने ?
अनि विभिन्न दलका भातृ स’ङ्गठन रबि लामिछाने एउटा पत्रकारको बि’रोध गर्दै कुर्लदा आफ्नो देशको ब्यबस्थापिकामा अर्को देशको भाषा प्र’योग गरेर चुनौती दिदा कुन दुलोमा पसेका छौ ? खै अत्तो पत्तो छैन त ? कि मौन समर्थन हो ?
नत्र भने यस्ता देश’द्रोहिलाई पाता फर्काउनु पर्छ कि पर्दैन ? संसद भवन छिर्न रोक्नु पर्छ कि पर्दैन ?
Previous राष्ट्रपति ज्यु र नेताले आफ्नो सत्ता र देशको स्थिती बुझ्न सक्नुभ’एन: अभिषेक अधिकारी
Next सरिता गिरीको सपोर्ट लिँदै मातृकाले भनेः गंगा चौधरीको मण्ड’ले राष्ट्रवा’द,,हेर्नुहोस!